All Share: ဖိုင်များလွှဲပြောင်းပြီး Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်လုပ်သမျှကိုမျှဝေပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » အားလုံး Share: ဖိုင်တွေကိုလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ဘာမှမဝေမျှ
အားလုံး Share: ဖိုင်တွေကိုလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ဘာမှ APK ကိုဝေမျှ
အဆုံးစွန်မှာ file sharing tool ကို, Shareall မှကြိုဆိုပါ၏! Shareall မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, သင်ကလွယ်ကူသောဖိုင်တွေ share နှင့်မျှမတို့အချိန်အတွက်အခြားမည်သည့် Android ဖုန်းကနေဖိုင်တွေလက်ခံရရှိရန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ app ကိုဗွီဒီယိုဝေမျှခြင်း, ဓာတ်ပုံကိုလွှဲပြောင်းဓာတ်ပုံခွဲဝေမှုအဘို့အပြည့်စုံထောက်ခံမှုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်သင်အလွယ်တကူအဖြစ်ကောင်းစွာထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကနေဖိုင်တွေခံယူနိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်အသံဖိုင်တွေ, installed apps များ, ဂိမ်းများသို့မဟုတ်အခြားစာရွက်စာတမ်းလွှဲပြောင်းရန်စီစဉ်နှစ်ခု Android ထုတ်ကုန်များအကြားဖိုင်များကို ZIP နေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာအလျင်မြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဝေမျှမယ်အားလုံး app ကိုအထူးသဖြင့်သင်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးဝေမျှခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ဖို့ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူမခွဲခြားဘဲသင်ရုံဝေမျှကြပါပြီ file အရာကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်မည်သည့်အချိန်ကပေးပို့နိုင်ဖြစ်ခြင်းအားလုံးအနေဖြင့်, သင်အမြဲလိုချင်သောက Android ဖိုင်လွှဲပြောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်တွေမျှဝေနောက်တစ်နေ့အဆင့်အထိအမှုအရာကိုယူနိုင်စွမ်း။ ဝေမျှမယ်အားလုံးသင်တစ်ဦးတွေအများကြီးကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုအလွန်အစာရှောင်ခြင်း, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖိုင်ခွဲဝေမှုအတွေ့အကြုံကိုကယ်တင်တတ်၏။
သင်အလိုရှိပါလျှင် Plus အား, သင်အလွယ်တကူလည်းအသံခွဲဝေမှုနဲ့ audio လွှဲပြောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေစေသည်မျှဝေပါ။ တဖန်သင်တို့လည်းဒီဝေစုကအားလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ထက်အခြားဘာမှလုပ်ဖို့မလိုဘဲအမြန်ဆုံးဖိုင်လွှဲပြောင်းရ!
သင်သည်မည်သည့်ကွန်ရက်ကန့်သတ်မှုများမှရှောင်ရှားရန်အဘို့အ⦁ဝေမျှမယ်အားလုံးလွယ်ကူစေသည်။ ဤသူသည်သင်တို့မှထွက်ရှိအကောင်းဆုံးဖိုင်ခွဲဝေမှု app နဲ့အကောငျးဆုံးအမြန်နှုန်း get ကိုဆိုလိုသည်။
သငျသညျချင်လျှင်⦁, သင်သည်သင်၏ဖုန်းမှဖုန်းကိုအကြောင်းအရာပုံတူစတင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအားလုံးဒေတာဖိုင်များ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဒီဝေစုနှင့်သင်၏အရေးကြီးသောဖိုင်များကိုအတစ်ထပ်ရှိသည်ဖို့အများကြီးပိုလွယ်ပါတယ်။
⦁ Android ကိုမှဓာတ်ပုံကိုခွဲဝေမှုနှင့်ဖိုင်ခွဲဝေမှုလုပ်ဖို့တတ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သို့သော်ဝေမျှမယ်အားလုံးသငျသညျအကောငျးဆုံးအမြန်နှုန်းမှာဓာတ်ပုံကိုလွှဲပြောင်းနှင့်ဗီဒီယိုမျှဝေရေးလုပျဖို့ကူညီခြင်းဖြင့်သောအရာတို့ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်!
⦁ကိုသင်ပုံစံအမျိုးအစားမျိုးစုံကနေရွေးချယ်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးအားလုံးဖိုင်တွေကို support Share, သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဓာတ်ပုံကိုဝေမျှခြင်း, ဖိုင်မျှဝေခြင်းကိုလိုခငျြသို့မဟုတ်သင်ရုံဗီဒီယိုများပေးပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ app ကိုသင်တို့အဘို့အကြောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
⦁ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး Share ရန်, သင်သည်မည်သည့်အရည်အသွေးအဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှနှင့်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ သင်ကသင်လိုချင်သောဖိုင်မဆိုအမျိုးအစားဝေမျှဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကြပြီးအဆုံး၌အဘယ်သူမျှမအရည်အသွေးကိုအရှုံးရှိရလိမ့်မည်။
အားလုံးဝေမျှမယ်ကိုအပေါ်သို့ကျနော်တို့အမြဲတန်ဖိုးနှင့်အရည်အသွေးပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ငါတို့သည်သင်တို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုငျလိုခငျြသငျနှငျ့အတူဓါတ်ပုံ, ရုပ်ပုံတွေနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုယူချင်နားလည်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကတစ်ခုတည်းအရပျ၌ချင်တယ်အင်္ဂါရပ်အားလုံးကမ်းလှမ်းသောကွောငျ့ဝေမျှမယ်ရှိသမျှတို့, ကောင်းမွန်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ဝေမျှမယ်အားလုံးအသေးစိတ်ဖို့အစွမ်းကုန်အာရုံစိုက်မှုကယ်တင်နှငျ့သငျမဆိုအရည်အသွေးအဆုံးရှုံးဘူး။
Plus အား, ရှိသမျှထွက်ရှိပါတယ်အမြန်ဆုံးဖိုင်ခွဲဝေမှု tool တစ်ခုဖြစ်သည်မျှဝေပါ။ သင်သည်မည်သည့်လုပ်ရတဲ့မပါဘဲအံ့သြဖွယ်အမြန်နှုန်းကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင်အမြဲမြန်ဆန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖိုင်ခွဲဝေမှုကိုခံစားချင်တယ်ဆိုရင်ကြိုးစားဝေမျှမယ်အားလုံးတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ပေးပါဘူး, ဒီ tool ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးတွေအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူဝဘ်ပေါ်တွင်သင်၏အသက်တာကိုလုပ်ပါလိမ့်မည်!
သင်သည်အခြားမိုဘိုင်း device ကိုဝယ်လို့နှင့်ဖုန်းအသစ်မှဖုန်းအဟောင်းထဲက data အားလုံးကိုလွှဲပြောင်းရန်လိုလျှင်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောဝေစုရှိသမျှနှင့်အတူကအားလုံးကိုမျှဝေပါ။
တိုးမြှင့် Feature ကိုဝေမျှခြင်း
အားလုံး Share: ဖိုင်တွေကိုလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ဘာမှမဝေမျှ
4.42 ကို MB
မဆို App ကို Send ...
Smart Transfer: …